စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချပြီး သေကြာင်းကြံပြန်ပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချပြီး သေကြာင်းကြံပြန်ပြီ။
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချပြီး သေကြာင်းကြံပြန်ပြီ။
Posted by ဆူး on Dec 12, 2011 in News | 27 comments
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ ဆူး စိတ်ကူး
ဘယ်လို အကြောင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာကို ရာဇ၀င်ရိုင်းစေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
အဲဒီလောက်ထိ လောကကို လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးသင့်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုသတ်သေတာကော သူတပါးကိုသတ်တာပါ အားမပေးပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့ပြီး မိုက်ရူးရဲဆန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ စိတ်ညစ်တိုင်း၊ ဒုက္ခရောက်တိုင်းသာ သတ်သေမယ်ဆို ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ တော်တော်နည်းသွားမယ် ထင်တယ်။
သူငယ်မကိုတော့ သေချင်လောက်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေပုံမို့ သနားစာနာပါတယ်။
ဟိုမှာအိမ်ဖေါ်လုပ်မယ့်အစား မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး အ်ိမ်ဖေါ်လုပ်ပါလား။
စင်္ကာပူထက်လဲ တ၀က်မက အလုပ်သက်သာ-
အိမ်ရှင်တွေကလဲ မျက်နှာတကြည့်ကြည့်နဲ့ ဖူးဖူးမှုတ်ထားတာ။
အိမ်ဖေါ်ကောင်းများဆို ထွက်မှာကြောက်လွန်းလို့ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်တောင်လုပ်တာ တွေ့ဘူးတယ်။
(ရွဲ့ပြောတာနော် .. ပြည်ပသွားကတည်းက သူဌေးလုပ်ချင်လို့သွားမှန်း သိပြီးသား)
အဲဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ နဂိုကတည်းက မျက်နှာမရရှာတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ပိုတောင် နာမည်ပျက် အခက်တွေ့တော့မယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာမိန်းကလေးအလုပ်သမားတွေပေါ့။
PS – အပေါ်ကနှစ်ဦးမန့်ထားတာကို အနီကဒ်ရဲရဲလေးတွေပေးထားလို့ ကျုပ်လဲအားကျတာနဲ့ တမင်ဒီလိုရေးပါတယ်။
ဒီပို့စ် ကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာအမျိုး
စင်ကာပူနေ မြန်မာ အမျိုးသမီး အမျိုးသားအပေါင်း
တို့ ပူပေါင်း၍ အဖြေရှာနိုင်ကြပါစေ၊။
– TTNU |60- Hits|
Posted by TTNU on Dec 11, 2011
ကိုနေဝန်းနီ တင်ထားသလိုပါပဲ။ ဤ ခရီး တော်နီးလှပေမဲ့ ဝဋ်ကြွေးမကင်းရှာသူ ကလေးမ
မသေဘဲ ကျန်နေပါပေါ့လား။ နေလည်းကြွေ သေလည်းကြွေတဲ့ ဘဝလေးများဖြစ်နေရော့လားကွယ်။
အသက်ရှင်မနေချင်လောက်အောင် ဘဝက ဘယ်လောက်များ ကြမ်းသွားတာပါလိမ့်။သနားမိပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရလောက်အောင်ထိ တွန်းပို့လိုက်တဲ့ အခက်ခဲဒုက္ခတွေက ဘယ်လောက်တောင် များနေသလဲ ညီမလေးရယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သူများနိုင်ငံသွား၊ ဒုက္ခရောက်၊ အရှက်နဲ့အသက်နဲ့လဲမယ်ဆိုပြီးသေကြောင်ကြံ၊ဘယ်သူမှ မသနား……
မြန်မာပြည်မှာ ကြက်မလေး ဖြစ်သွားတာကမှ သနားမဲ့ကြောင်လတ်ရှိသေး။
ပြည်ပရောက်တွေ တယောက်နဲ့တယောက် ဖေးမကြဘို့လိုပါပြီ။ လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး အပြစ်တင်စောတတ်တဲ့ (ပိုက်ဆံမကုန်တိုင်း) လုပ်ရပ်တွေကိုရှုတ်ချကြဘို့လိုပါပြီ။ လူးသားတိုင်းအမှာမကင်းကြပါဘူး။ ပြည်ပရောက်တွေကြားထဲ ဒီအသိတရား တွေ ပျံ့နှံ့အောင်လုပ်ဘို့လိုအပ်လာပါပြီ။ ခေတ်နောက်ပြေးတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ နဲ့ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘ၀ကိုအဆုံးခံတဲ့ စနစ်ဆိုးကြီးကို တော်လှန်ကြဘို့လိုပါပြီ။ ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးစိတ် အယူအဆတွေ…..။
ဒီလိုအဖြစ်တွေကို ရပ်တန်းကရပ်ကြဘို့ လက်တွဲကြရမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ မတူညီတဲ့ အတွေးအခေါ်မာန်မာနတွေဘေးချိတ် ပြီးကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ အိမ်အတူနေ roommates ချင်း၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ချင်း ယိုင်းပင်းကြတယ်ဆိုတာ အမှားကြီးပါလို့ လက်ညျှိုးထိုးနိုင်တဲ့ ကျမ်းဂန်လာတခုခုများရှိနေကြလို့လား…..
သေခြင်းတရားကိုကြောက်ပြီး…. တရားတွေအားထုတ်ကြ…တရားစခန်းတွေဝင်ကြ… တရားတွေနာကြ….
တစ်ချို့ကျတော့လည်း…နေခြင်းတရားကိုကြောက်ပြီး.. တိုက်ပေါ်ကခုန်ချသေ..။ ကြိုးစွဲချသေ…။ လည်ပင်းဓါး
နဲ့လှီးပြီးသေ…။ ရထားလမ်းပေါ်အိပ်ချတဲ့သူကအိပ်ချ…။ ချောက်ထဲခုန်ချတဲ့သူကခုန်ချနဲ့…နည်းအမျိုးမျိုးသုံး
ပြီး…သေနေလိုက်ကြတာ…။ တကယ်တော့…ဒါတွေဟာ..ပျော့ညံ့သူတွေ့ရဲ့… လုပ်နည်းကိုင်နည်း..တွေး
နည်းခေါ်နည်း..တွေပါပဲ..။ ဘာ့ကြောင့်လဲလိုရဆိုရရင်… လူနဲ့..လူချင်းဆက်ဆံမှုရဲ့ရလာဒ်တွေအပေါ်မှာ..
ထိုသူတို့ရဲ့ခံစားမှုဟာ. .ပြည့်စုံကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့..သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ..။ တကယ်
တမ်းသာ…လူနဲ့.. လူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ..ကိုယ့်ဘက်ကဖြည့်ဆည်းရမယ့်ဝတ်တရားတွေ.. ကိုယ့်ဘက်က
ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်စည်းကမ်းတွေကို.. .သေသေချာချာသုံးသတ်ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်.. ဒါမျိုးတွေဟာ..ဖြစ်စရာအ
ကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး…။ ခက်တယ်ဗျို့ ပြောရရင်လည်းအရှည်ကြီးဖြစ်နေဦးမယ်..။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့….
သေခြင်းကို. .ကြောက်တဲ့သူရော…နေခြင်းကို. .ကြောက်တဲ့သူပါ… .တကယ့်လူလောကအ၀န်းအ၀ိုင်းကို
သာယာလှပတဲ့အဖြစ်ကို အသိနဲ့ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့… သူတော်ကောင်းစစ်စစ်တွေကို..ရှာဖွေဆည်းကပ်ကြပါ.
အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအရိယာစစ်စစ်တွေရဲ့. .ဟောကြားတဲ့..အဆုံးအမကိုခံယူကြပါ..။ သူတော်ကောင်းစစ်စစ်တွေကို.. ရှာဖွေဆည်းကပ်ကြပါ.
အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအရိယာစစ်စစ်တွေရဲ့. .ဟောကြားတဲ့..အဆုံးအမနဲ့ထပ်တူ …သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့. .နှလုံးသွင်းမှုတွေနဲ့.. လူနဲ့.. လူခြင်းဆက်တဲ့အခါမှာ…အသုံးချမယ်ဆိုရင်…အထက်ကတင်ပြထားတဲ့
မိန်းခလေးလိုအဖြစ်မျိုးအပြင်… တခြားသော..လူ့ဘောင်လူ့လောကရဲ့. .နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာတွေကို… အဆင်ပြေငြိမ်းချမ်းနိုင်မယ်လို့သာ…
အော် မိုက်လိုက်တဲ့ ကလေးမ။
ဖတ်ရ မြင်ရ တာ မသက်သာလိုက်တာဗျာ။
မသေဘူးဆိုရင်တော့ ဂိုးတူသည်ဂျေး ပေါ့ဗျာ နော။
ကြားထဲမှာ ဘာပြသနာ ရှိလဲ ဆိုတာ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းပြီး ဆက်လက် ဖော်ပြနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။
ငဖော်ရီးဆို..ပွင့်မှုံနေခြည် မရတာတောင်..ဖင်ထိုင်ခုံပေါ်က မခုန်ချ ခဲ့ပါဘူး.
ဒင်းတို့ က ဘဇာကြောင့် ခဏခဏ ခုန်ခုန် ချနေကြသနည်း…၀ှ မီစဉ်းစားတတ်တော့ဝူး..
ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့ အခုလိုသေကြောင်းကြံရတာလဲ
လူတိုင်းမှာ သူ့ဒုက္ခနဲ့သူတော့ရှိကြတာပဲ ဒီလိုသာ စိတ်ညစ်တိုင်း သေကြောင်းကြံရမယ်ဆိုရင်တော့ …..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူများနိုင်ငံမှာ အခုလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ မြန်မာဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကိုညှိုးနွမ်းစေတော့မှာပဲ .
ဆူးရေ … အဲ့ဒီသတင်းကြားတော့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ် … ။
ဘယ်လောက် အခက်ခဲ အကြပ်တည်းထဲ ရောက်ပါစေ …. ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတော့ မဟုတ်ဘူးလေ … ။ ထစ်ခနဲဆို သေကြောင်းကြံကြတာက နည်းနည်း စိုက်ကိုဝင်နေတဲ့လူတွေမို့လို့ဖြစ်မယ် … ။ သူများနိုင်ငံမှာ သွားသွားသေကြတာ … မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့တာကို မောင်းခတ်ကြေငြာနေသလိုပါပဲ … ။
အခက်ခဲဆိုတာခဏတာ ယာယီပါပဲ …. ။ ကိုယ်တွေလည်း သေချင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်ဖူးတဲ့ အကြိမ်တွေ လေးငါးကြိမ်ရှိခဲ့ဖူးတယ် … ။ ဒါပေမယ့်… အခက်ခဲဆိုတာ အချိန်တိုင်းတာ တစ်ခုရောက်တိုင်း တနည်းနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရတာမို့ … သတ်သေခြင်းနဲ့တော့ မဖြေရှင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ … ။
အခက်ခဲတွေကနေ ရတဲ့ ..အတွေ့ကြုံတွေကတော့ အမြတ်ပေါ့ .. ။
ဒီသတင်းလေး ဖတ်လိုက်ရတော့ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတဲ့ ကောင်မလေး ဆိုပြီး သတင်းကြီးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ပုံလားလို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ နောက်တယောက် ဖြစ်နေတယ်။
ရွာထဲမှာ မရှိသေးတဲ့ သတင်းမိုလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီကောင်မလေးကိုတော့ ဘာမှ မရည်ညွှန်းပါဘူးနော်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေ ကြသူတွေကိုပဲ ခြုံပြီးပြောချင်လို့ပါ။
သူများပေးတဲ့ဒုက္ခကြောင့် ကိုယ်တောင် ဒီလိုသေချင်နေပြီဆိုရင်
ကိုယ်ကလဲ သူများကို ဒုက္ခမပေး(မဖြစ်စေ)ခဲ့ရင် ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်း.. သတ်သေနှုန်းက.. ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဝင်လောက်တယ်..။
အဲ.. ကလေး..ဖွားသေနှုန်းကလည်း ထိပ်တန်းပဲ..။
ဒီလိုဖြစ်တာတွေရဲ့..တရားခံက… စံနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး..။ စံနစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး…။
အတွေးအခေါ်တွေ..ပြောင်းပြန်လှန် ပြင်ကြပါ..။ ရှေးစွန်းစွဲတွေဖျောက်ပါ..။ တယောက်ထဲသုံးကိုယ်ခွဲထားတာတွေပြင်ကြပါလို့..။
ဆူး ကတော့ ၃ကိုယ်ခွဲ ဘ၀ ကို တစ်ကိုယ်စာ အရှေ့ လတ်တလော အနောက် အတွက်ပဲ စဉ်းစားတယ်။
သေနှုန်းမြင့်တာ… သီလနည်းကြလို့.. ဂလို ဂလိုပဲ.. ဘာမှ ထပ်ပြီး ရှုပ်ရှုပ် မစဉ်းစားဘူး။
ဘုရားဟော အတိုင်းသာ ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြမယ် ဆိုရင် ဓမ္မပါလ တို့ ရွာလိုဖြစ်သွားမှာပဲ.. ဘုရားဟော အတိုင်း မနေလို့ ဒီလို ဖြစ်တာ..
ဘာသာရေးကိုတော့ ရှုံ့ချ ဖို့ နှပ်ကြော ပေးလို့ ကတော့ မီးဒုတ်ပဲ.. ကောက်ရိုးအုံပြီးတော့ ရှို့ ပစ်မယ်။ ဒါပဲ..
အင်း ….. သဂျီးပြောတဲ့အချက်အလက်တွေက အမှန်တွေဆိုလို့ ..
ပြန်ရင် အသက်တိုနေမှာစိုးလို့ ..ခွေးဝင်စားလုပ်ချင်စိတ်ကို
နေ့တဒူဝ ဆက်ဆံရတာ လည်း အသက်တိုစေတဲ့အ
အကြောင်း၇င်း တခုဖြစ်မလားပဲ ..နော်….
မီဒုတ်ကို ရှို့လာသူဘက် ပြန်လှည့်ပေးလိုက်သော
ဘာသာကို ကိုးကွယ် ကြပေမဲ့ လက်ခံကျင့်သုံးမှု နဲ့ နားလည်မှု အတိုင်းအတာ နည်းလို့ ဒီလို ဖြစ်ကြတာလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ မစဉ်းစားဘူး အခု ဘ၀ ကောင်းဖို့ တွေးမယ် သေပြီး ဘ၀ ပြီးရော ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ နဲ့ လာချိန်ဆပြောမှာ စိုးလို့.. ပြောတာ..
ဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေက ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို အလွန်အကြူး မဖြစ်အောင် နေနိုင်အောင် ကျင့်ကြံခိုင်းထားတာပါ။
သတ်သေတယ် ဆိုတာ.. စိတ်ဓါတ်ကျတယ် ဆိုတာ အတိုင်းအတာ တခုထက် လွန်သွားလို့.. လောကမှာ လက်တွေ့ နာကျင်တာထက် နာမယ်နော်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက် ခံရတာ အဆိုးဆုံးပဲ.. အဲဒါကြောင့် ကြောက်တတ်ရင် ၂ခါသေတယ် ဆိုတဲ့ စကားပေါ်လာတာပါပဲ။ ကြောက်စိတ်တွေ အလွန်အကြူးဖြစ်လို့ သတ်သေ ရတာပါ။
စိတ်ခံစားမှု အလွန်အကြူး မဖြစ်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း သတိလေးနဲ့ ဆင်ခြင်နေနိုင်ဖို့ သင်ကြားပေးသွားတာပါ။
ဒီမိန်းကလေးသတ်သေတာ.. အလွန်အကြူးဖြစ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ ကြောက်စိတ်တွေကြောင့် သတ်သေသွားတာ.. သူ သတ်သေတာ တရား အဆုံးအမ နဲ့ ကင်းကွာနေလို့ ဆိုလိုတာ.. သိပြီလား ဂိဂိရေ..
သဂျီးပြောတာ မှန်တယ် မှားတယ် တခွန်းမှ မပြောဘူး.. ဘာသာကြောင့် လူတွေ အသိခေါက်ခက် မိုက်တွင်းနက်တဲ့ ပုံစံ မန်းလို့ ပြောတာ.. ဂိဂီ ကတော့ စိုင် ကျွှေးတဲ့ ငရုတ်သီး အစပ် အစားများလို့ လိပ်ခေါင်းပူပြီး အဖျားတက်တာတောင် အားမရသေးဘူး.. မီးဒုတ် လာကိုင်တာလား.. လာကိုင်တဲ့ လက်ကို မီးရှို့လိုက်မှာနော်.. ဒါပဲ.. ဂိဂိ ဆို ကောက်ရိုးမလိုဘူး.. အမွှေးများလို့.. ၀တ်ထားတဲ့ အနွေးထည်အကျီက အမွေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ မီးစွဲ လွယ်တယ်နော်.. ဟိဟိ..
>>>လောကမှာ လက်တွေ့ နာကျင်တာထက် နာမယ်နော်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက် ခံရတာ အဆိုးဆုံးပဲ
>>>မီးဒုတ် လာကိုင်တာလား.. လာကိုင်တဲ့ လက်ကို မီးရှို့လိုက်မှာနော်
>>>တရား အဆုံးအမ နဲ့ ကင်းကွာနေလို့ ဆိုလိုတာ.. သိပြီလား
>>>ဘာသာကို ကိုးကွယ် ကြပေမဲ့ လက်ခံကျင့်သုံးမှု နဲ့ နားလည်မှု အတိုင်းအတာ နည်းလို့
တော်သေးဘီ ဆန်ပြုတ်လေး နွှေးသောက်နေတာဘဲ ကောင်းပါတယ်လေ..
ကွန်ဇာဗေးတစ်ဗ် မေတ္တာရှင်မကြီး ပို့သသော မေတ္တာကြောင့် …
ဂီဂီလည်း အဟွတ် အဟွတ်….ဖစ်နေဘာဘီကွယ် ….
ကောက်ရိုးနဲ့တင် ဘယ်ရမလဲ ဆူးရဲ့၊ ရေနံချေးအုံ ဓာတ်ဆီလောင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပါဖျန်းပြီး ပန်ကာပါဖွင့်ထားပေးရမယ်။။။။ သဂျီးကင်ဆို ဘီလူးသရဲတွေ ကြိုက်မှကြိုက်….။
ဂျပန်၅၀၀ နဲ့ ၅ခါခံရတော့မယ် …..
အလုပ်အကိုင်ကောင်း ရှားလို့ အပြင်ထွက်တာချင်းတူရင် ထိုင်းကိုသွားရတဲ့သူတွေ ကို သနားဆုံးပဲ၊
အရင်က ကိုယ့်အောက်က လူမျိုးကို အခု မော်ဖူးနေရတယ်၊
သူ့ခမြာ သနားပါတယ်။ အလိုဆန္ဒတွေမပြည့်ရတဲ့ကြားထဲက နောက်ဆုံးလို့ ဆိုတဲ့ ဆန္ဒလေးတောင် ပြည့်မသွားရှာဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆန္ဒတွေ အားလုံးပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။